Ukukhulelwa nokulungiselela isisu sokutya
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha ye-pectoral incedo kuwo wonke umntu, ngakumbi ngexesha lokukhulelwa, xa utshintsho oluphambili lwenzeka ngebele. Eyona ndlela ilula kakhulu kwaye isebenzayo: iintendelezo kunye nomgudu wokucima phambi kwebele ekuphumuleni, amaxesha angama-10-15. Impumelelo yokuncelisa imfuyo kwimfundo yenyama ayixhomekekanga, engenakutsholwa malunga nomlo wesigxobhozo. Ukukhulelwa kunye nokulungiselela isisu sokusondla sisihloko sethu.
Into ebonakalayo ye-anatomiki enokuthi ifune ukulungiswa okukhethekileyo kwesifuba sokusondla isikhumba esilula kakuhle se-areola kunye neengono ze-entrapped. Le ndlela yokugqibela, ngendlela, ayiphazamisi ukunyusa okuphumelelayo, kodwa iyanzima ukubanjwa kwebele. Qinisekisa ukuba iipuni zifuna ukulungiswa, kuphela ingcali. Ukuba kunjalo, lo msebenzi uza kunceda. Esinye isandla sisekela isifuba, esinye sithatha ingxowa kwaye siyiphonsa, siyijike kancane; ngoko ungapheli kwemizuzu emibini okanye kathathu ngosuku. Oomama abathile bexesha elizayo basebenzisa ipompa yebele okanye abaphuculisi beemvini ezikhethekileyo ukuxazulula le ngxaki. Zonke izigwenxa zenziwa ngokunyamekela ukuba zingabangeli ukuphambana kwangaphambili, kwaye ukuba kunokwenzeka emva kweveki yama-37 yokukhulelwa.
Phantse bonke oomama banako ukubethelela abantwana babo, kodwa akubona bonke abayifunayo. Ingqondo engasilungelelwanga kwinkqubo kwaye iphenduka ingxaki. Tunela ekunceliseni. Kule nto, zimbalwa iziphakamiso zokuzimela ngokusisigxina ukuba ubisi lwebele lubona kukutya okusemntwaneni (nangona kunjalo kunjalo). Ncokola oomama abanamava: baya kukuxelela ukuba ukunyamezela ngumsebenzi omkhulu, kodwa uvuyo olukhulu. Kufuneka afunde, ekuqaleni ubunzima bunokwenzeka, kodwa abayikuthelekiswa kunye nenxaxheba yoluntu, xa kulungiswa. Fumana abantu abanomdla. Ekunceliseni, njengoko kukho nawuphi na ishishini, impumelelo ayisoloko ivele ngokuzenzekelayo, ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukukhuphisana nayo. Ukwenza oku kwiinkampani ezintle kulula kakhulu kwaye kuyonwabile, ngoko fumana le nkampani - ekulungiseni ukuzala, kwiwadi yesibhedlele, kwakhona kwinqanaba labantwana kwi-polyclinic, kwintendelezo phakathi koomama abahambahambayo, kwi-intanethi. Ukuxubusha okuncinane nalabo abangathembekiyo. Kusenokuba ngumama okanye ugogo wakho, obengenalo okanye akanalo ubisi obaneleyo ngokwemiqathango yabo. Enyanisweni, ukuzalwa cishe kungadlala indima kule ngxaki (njengobunzima besifuba).
Iyakwenzeka ngenxa yokusabela kwesikhumba kwimpembelelo engaqhelekanga okanye ngenxa ye-vasospasm - ukuphendula kweempahla kwiqondo lokushisa kwendalo. (Ngokuqhelekileyo kubasetyhini abanjalo, nakwicala elingenanto elingenanto lingabangela ukuba lithandeke.) Kodwa ngokuphindaphindiweyo iingono zibuhlungu ngenxa yokuba inkunzi ayifakwe ngokufanelekileyo kwibele okanye iyayibamba ingono kwaye ayiyiyo yonke into. Ubuso bomntwana kufuneka buguqulwe kwi-ingono, isisu esiswini sesisu, isikhumba esisezantsi ngaphantsi kweengono. Ukuvula kakhulu umlomo, umntwana kufuneka aqonde indawo enkulu kunazo zonke zesifuba. Xa isetyenziswe kakuhle, ingxaki iyalala ngokwayo kwiintsuku ezi-3-7.
Kwaye kwakhona isizathu sisekhonkco esifanelekileyo esifubeni. Kwakhona, iifayile zingabonakala ngenxa yokuhlanjululwa rhoqo kwebele kunye nesepha, ediba isikhumba kwaye iphule ibhalansi yamanqatha amanzi. Kwanele ukuba uhlambe amabele akho ngamanzi ahlambulukileyo kabini ngemini, kwaye ugcoba isikhumba se-ingono ngekhilimu enamafutha ngamavithamini A, E kunye no-D (kungcono ukuba akudingeki uhlanza ngaphambi kokutya). Kwaye ungasebenzisa ubisi lwebele: emva kokutya, fakela amaconsi ambalwa uze uhlabe phezu kwesikhumba, uvumele ukuba kuphephe. I-Salvage kunye neentsikelelo zi-pads ezikhethekileyo zokutya, ezinceda amabele alulame. Ukuxhamla ubisi, i-lactostasis kunye ne-mastitis - iingxaki ezivame ukuveliswa ngokunyanga okungafanelekanga, ukutya okunqabileyo, ukunyanga okungafanelekanga. Isisombululo sokunyuka kwebisi kunye nokunyanzeliswa kwesifuba sinokukhwela ngokukhawuleza ubisi ngomhla wesi-2 ukuya ku-5 emva koovimba. Kubalulekile ukondla umntwana ngokufunwa kunye nangethuba elide alifunayo. Ngaphambi kokondla, thatha ihafile elifudumeleyo, uhlaziye ngokulula. I-Lactostasis kukukhutshwa kwamathambo ebisi. Unina ongumhlengikazi, ukongezelela ekuphunyezweni kwezinye iinqununu, akudingeki ucinezele ibele ngexesha lokutya, unxibe ngaphantsi kwengubo yangaphantsi uze uvumele ukutyhalwa kunye nokulimala kwesifuba. Phatha i-lactostasis ngcono phantsi kolawulo logqirha. Kwaye indlela eyona ndlela iphumelelayo-ngokuphindaphinda kunokwenzeka ukubeka umntwana kwisifuba esigulayo kwaye utshintshe isikhundla xa uyondla (uhleli, ulala), ukuze umntwana asuse ubisi kuzo zonke i-lobes zesifuba.
Ezinye izifo zichasene ngqo nokuncelisa ibele: uhlobo olusebenzayo lwesifo sofuba, i-syphilis, umkhuhlane obomvu, i-diphtheria; izifo zeemvelo, izifo zesimo senhliziyo, isibindi kunye neentso, isifo sikashukela. Ngezinye izifo, kubandakanya ukubandayo (i-SARS) kunye ne-cutaneous, kunokwenzeka ukugcina ubisi. Ugqirha uya kucebisa unyango oluhambelana nokuncelisa, okanye ukuxelela indlela yokulungisa ngokufanelekileyo ukutyeswa kwexeshana kwondlo ngaphandle kokuchaphazela umveliso wobisi.
Ukukhupha isisu sokukhulelwa
Ukutyelela kokuqala kwintlobo yesifo somzimba ekukhulelweni
Ukukhulelwa kwesibili njani?
Iindlela zabantu zokukhulelwa ngokukhawuleza
Ndiyakwazi ukuya e-bathhouse ekhulelwe?
Amazwi okubonga kubazali, ootitshala kunye nootitshala kwiqela lokugqiba iziqu (ii-11, 9 neye-4, i-kindergarten)
Iidlela zokulungiselela izitya zeetafile ze-buffet
Ukunyamekela ifenitshala yokuqhekeza
Indlela yokwenza iinwele ezinqabileyo
Ierberberries noshukela ebusika
Ukupheka: izityalo zokutywala, zokupheka
Iindlela zabantu zokususa iinwele
Indlela yokukhetha intambo?
Iimpawu ezimnandi ngo-Matshi 8-ukuba isikolo kunye ne-kindergarten-kubantwana abaselula, abantwana besikolo esiprayimari kunye nabafundi besikolo esiphakamileyo-Imizekelo yeziganeko ezihlekisayo kunye ezihlekisayo ngo-Matshi 8 ngamama
Ifakethi ye-Hake ebhakakwe yimifuno
Umfanekiso wesitempu esifanelekileyo kufuneka ube ...
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo we-chrysocolla